Baro aasaaska suuq geynta Pay-Per-Click (PPC) | Suubbis Blog
Baro aasaaska suuq geynta Pay-Per-Click (PPC)
Haddii aad maqashid xoogag ku saabsan suuq geynta PPC oo aad u riyaaqsan tahay in aad ka baratid wax badan ama aad ogtahay in aad rabto in aad isticmaasho PPC si aad suuqa ugu ganacsato, laakiin aadan hubin meesha aad ka bilaabi lahayd, waxaa timid meesha saxda ah o aad ka baran laheyd!
Kani waa casharka ugu horeeya ee PPC, oo ah saddex koorsooyin hagid oo ku baraya wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaatid PPC iyo sida loo sameeyo Ugu horreyn, waxaan u baahanahay inaanu qeexno PPC iyo in la helo faham aasaasi ah oo ku saabsan sida xayeysiinta PPC-ga u shaqeyo. Aan tagno!
Waa maxay aasaaska PPC?
PPC waxay u taagan tahay riix-riix-riix, moodelka suuq-geynta internetka kaas oo xayeysiiyaashu bixinayaan lacag mar kasta oo mid ka mid ah xayeysiiskooda la riixo. Asal ahaan, waa hab lagu iibsado booqashada goobtaada, halkii aad isku dayi lahayd inaad “kasbato” booqashooyinkaas si caadi ah.
Raadinta xayeysiinta mashiinka waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan PPC. Waxay u oggolaaneysaa xayeysiistayaasha in ay dalbadaan meeleynta xayeysiinta ee mashiinka raadinta ee isku xirnaanta raadinta marka qof uu raadiyo erayo muhiim ah oo la xidhiidha dalabkooda ganacsi. Tusaale ahaan, haddii aan ku darno erayga “software PPC”, xayeysiiskayaga ayaa laga yaabaa inuu ku soo galo meesha ugu sareysa ee bogga natiijooyinka Google.
Mar kasta oo aan xayeysiiskayaga nala soo dejiyo, u soo diraha booqdaha boggayaga internetka, waa inaan bixinnaa kharashka yar yar. Marka lacagta PPC ay si sax ah u shaqaynayso, khidmadu waa mid aan muhiim ahayn, sababtoo ah booqashadu waa ka qiimo badan tahay waxa aad bixiso. Haddii si kale loo dhigo, haddii aan bixino $ 3 guji, laakiin natiijada riixa ee iibka $ 300 waxaan badan faiidooyinkeena
Wax badan ayaa galaya dhisitaanka olole guuleysta PPC: laga bilaabo baarista iyo xulashada erayada saxda ah, si loo abaabulo ereyada muhiimka ah ee ololeyaal si wanaagsan loosoo abaabulay iyo kooxo kala duwan, si loo sameeyo bogag wareeg ah oo PPC ah oo la fududeeyay si isbeddel ah. Raadi-baarayaasha waxay ku abaal-mariyaan xayeysiinta kuwaas oo abuuri kara munaasabado, caqli-gal ah oo lagu beegsanayo olole-xisaab-celin adigoo ku amraya inay yaraadaan kadib adigoo isticmaalaya fur. Haddii xayeysiisyadaada iyo boggaga ka soo baxa ay yihiin kuwo faa’iido leh oo ku qanacsan isticmaalayaasha, Google ayaa kaa qaadaya wax yar oo riix ah, taasoo horseedi doonta faa’iido badan ganacsigaaga. Sidaas darteed haddii aad rabto inaad bilawdo isticmaalka PPC, waxaa muhiim ah in la barto sida loo saxo.
Muhiimadda xawaaraha boggaaga iyo siyaabaha aad kor ugu qaadi kartid
Waa maxay xayeeysiiska Google Ads